Tsy miankina fa… miankina | NewsMada
Par Taratra sur 04/07/2019
Ny fivoahan’ny vokatra ofisialy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka, nambaran’ny HCC, tetsy Ambohidahy, ny talata teo no ela. Ny ampitson’io ihany, namoaka fanambarana ireo depiote voafidy miisa 30 eo ho eo, avy amin’ny tsy miankina, fa hiditra an-daharana hanohana ny fitondrana ankehitriny. « Noho ny tombontsoam-pirenena… ». Izay ny hoe antony nandraisan’izy ireo izany fanapahan-kevitra izany.
Misy amin’izy ireo ny avy amin’ny antoko HVM, antokon’ny filoha teo aloha, saingy nandeha amin’ny anaran’ny tenany. Toa izany koa ireo efa nitana andraikitra tamin’ny naha minisitra azy tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina… Ny an’ny antoko TIM aloha iny, efa nazava ny fanambarany fa hipetraka ho mpanohitra. Sambany eo amin’ny tantaran’ny fanaovana politika ny fisian’ny antoko lehibe nandray izany fanapahan-kevitra izany.
Fa ny amin’ireto hoe « tsy miankina » ireto, efa nampoizin’ny rehetra fa tsy maintsy ho tonga amin’izao zava-mitranga izao. Efa hita taratra izany nandritra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Nohirahiraina ery ny hoe « tsy miankina, tsy miankina » tamin’izany fotoana izany. Nisy aza ny tsy nahandry akory ny fahavitan’ny fifidianana dia efa nilaza fa « raha lany eo, hanohana ny fitondrana ».
Izao, mipetrapetraka ery ny fanazavan-kevitra, hay ery ny mandamin-dresaka : “mandala ny fifanakalozan-kevitra”, “vonona amin’ny fifampiresahana”, sns. Izany ny atao hoe “tsy miankina”, “mahaleo tena”… nandresena lahatra ny mpifidy tamin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Izany ny fanaovana politika eto amintsika rey olona! Ny fotoana no mandeha fa ny fanao, tsy miova. Volan-kankafotra ka ny eo ihany no eo.